China kusona pamusoro makwapa akasvibirika zvipfeko ekisipota uye Product | miti yakasvibira
Kusona pamusoro makwapa akasvibirika zvipfeko
Rakarukwa bheji / chitaridzi zvinoitwa shinda chete yakarukwa Label kuenda apa, vaisona mune chinoramba magadzirirwo pazvinangwa kwazvo zvakadzama zvose magadzirirwo uye rugwaro pamusoro chigamba. izvo akakwana solustion kuti kana uchida mamwe yakanaka mashoko uye tsanangudzo zvikuru kuti nomusoni kana dzakarukwa havagoni kupa. Zviri rakanakisisa kusarudzwa Badges madiki sezvo unogona kubudirira tsanangudzo mukuru, uye zvizere duku. Nokuda sandara pamusoro uyu ndoda kubatwa abrasion uye fraying. Custom wov ...
Rakarukwa bheji / chitaridzi zvinoitwa shinda chete yakarukwa Label kuenda apa, vaisona mune chinoramba magadzirirwo pazvinangwa kwazvo zvakadzama zvose magadzirirwo uye rugwaro pamusoro chigamba. izvo akakwana solustion kuti kana uchida mamwe yakanaka mashoko uye tsanangudzo zvikuru kuti nomusoni kana dzakarukwa havagoni kupa. Zviri rakanakisisa kusarudzwa Badges madiki sezvo unogona kubudirira tsanangudzo mukuru, uye zvizere duku. Nokuda sandara pamusoro uyu ndoda kubatwa abrasion uye fraying.
Custom rakarukwa makwapa akasvibirika zvinogona kushandiswa anenge ose nzira nezvakarukwa makwapa akasvibirika anogona. Kushandisa wakawondereiko kudai mazuva ose shinda kuti dzakarukwa pamwechete panzvimbo dzakarukwa mugomo rejira, izvi zvinoguma chigamba kuti ane mvere chitarisiko pasina vanomutswa unaku. Vane akanaka kana Magadzirirwo akanyanya hwakadzama kana kunzwisisa kuti kubudirira chete nezvakarukwa rikurumidze. Zviri zvakare mukuru nzira kuita Photographic realism. zviso Human, nharaunda, uye duku rugwaro kunogona kuburitswa pamusoro zviduku kadikidiki makwapa akasvibirika nenzira chete zvaibvira guru dzakamendwa makwapa akasvibirika.
Previous: Kusona pamusoro bheji muiti
Next: Rakarukwa bheji Vagadziri
3d rakarukwa Badge
Nguvo dzakarukwa Badges
Hook And Loop rakarukwa Badge
Machine rakarukwa Badge
Nice rakarukwa Badge
School yunifomu rakarukwa Badge
Weaving Label Patch rakarukwa Badges
Rakarukwa Label Badge
Rakarukwa Patches Badge
Custom makwapa akasvibirika nokuti Mabhachi
Custom sublimation makwapa akasvibirika
chenille Varsity Letter T Patch , chenille Varsity Letter , Embroidered Badge , chenille Patch Letters , chenille Letter Patches , Hook And Loop rakarukwa Badge, All Products - 粤 ICP 备 18108880 号 -1